Ny Zanahary na Haky, araka ny fanaovana sikidy malagasy, dia ny tsanganan-tsikidy faharoa ambinny folo, isanireo tsanganan-tsikidy valo atao hoe tera-tsikidy, izay apetraka any aminny fàfana faharoa eo ambaninireo atao hoe renin-tsikidy, vokatry ny fampifanampiana ny soratry ny Ombiasa sy ny anny Tovolahy. Misy vaniny efatra toy ny tsanganan-tsikidy malagasy rehetra ny Zanahary, misy "lohany" sy "tratrany" sy valahany" na "vaniany" ary "tongony". Ny Zanahary dia mety hiseho ao aminny iray aminireo sora-tsikidy enina ambinny folo toy ny Tareky 1 1, ny Jama na Asombola 2 2, ny Asorasady 2 1 ...
Ny Fahasivy, araka ny fanaovana sikidy malagasy, dia ny tsanganan-tsikidy fahasivy, isanireo tsanganan-tsikidy valo atao hoe tera-tsikidy, izay apetraka any aminny fàfana faharoa eo ambaninireo atao hoe renin-tsikidy, vokatry ny fampifanampiana ny soratry ny Alisay sy ny Fahavalo. Misy vaniny efatra toy ny tsanganan-tsikidy malagasy rehetra ny Fahasivy, misy "lohany" sy "tratrany" sy "valahany" na "vaniany" ary "tongony". Ny Fahasivy dia mety hiseho ao aminny iray aminireo sora-tsikidy enina ambinny folo toy ny Tareky 1 1, ny Jama na Asombola 2 2, ny Asorasady 2 1 1, ny Alahasady 1 2 2, ny ...
Ny Ombiasa na Ombiasy na Mbiasa, araka ny fanaovana sikidy malagasy, dia ny tsanganan-tsikidy fahafolo, isanireo tsanganan-tsikidy valo atao hoe tera-tsikidy, izay apetraka any aminny fàfana faharoa eo ambaninireo atao hoe renin-tsikidy, vokatry ny fampifanampiana ny soratry ny Fahasivy sy ny anny Haja. Misy vaniny efatra toy ny tsanganan-tsikidy malagasy rehetra ny Ombiasa, misy "lohany" sy "tratrany" sy "valahaby" na "vaniany" ary "tongony". Ny Ombiasa dia mety hiseho ao aminny iray aminireo sora-tsikidy enina ambinny folo toy ny Tareky 1 1, ny Jama na Asombola 2 2, ny Asorasady 2 1 1, n ...
Ny Maly, araka ny fanaovana sikidy malagasy, dia ny tsanganan-tsikidy faharoa, iray aminny tsanganan-tsikidy enina ambinny folo, izay apetraka any aminny farany ambony sy laharana faharoa farany avy ankavananny fàfana itambaranny tsanganan-tsikidy rehetra. Isanireo atao hoe renin-tsikidy ny Maly, ka ny tsanganana, izay samy renin-tsikidy, eo alohany dia ny Tale, ary ny hafa manarakarala azy dia ny Fahatelo, ny Bilady, ny Fianahana, ny Abily, ny Alisay ary ny Fahavalo. Ny tsanganana valo manaraka dia lazaina hoe tera-tsikidy.
Ny Tale, araka ny fanaovana sikidy malagasy, dia ny tsanganan-tsikidy voalohany, iray aminny tsanganan-tsikidy enina ambinny folo, izay apetraka any aminny farany ambony sy farany ankavianny fàfana fitambaranny tsanganan-tsikidy rehetra. Isanireo atao hoe renin-tsikidy ny Tale, ka ny tsanganana hafa manarakarala azy, izay samy renin-tsikidy, dia ny Maly, ny Fahatelo, ny Bilady, ny Fianahana, ny Abily, ny Alisay ary ny Fahavalo. Ny tsanganana valo manaraka dia lazaina hoe tera-tsikidy, dia tsy inona izany fa ny Fahasivy, ny Ombisa, ny Haja, ny Zanahary, ny Asorotà, ny Tovolahy, ny Lalana ar ...
Ny Lalana, araka ny fanaovana sikidy malagasy, dia ny tsanganan-tsikidy fahadimy ambinny folo, isanireo tsanganan-tsikidy valo atao hoe tera-tsikidy, izay apetraka any aminny fàfana faharoa eo ambaninireo atao hoe renin-tsikidy, vokatry ny fampifanampiana ny soratry ny Tale sy ny anny Maly. Misy vaniny efatra toy ny tsanganan-tsikidy malagasy rehetra ny Lalana, misy "lohany" sy "tratrany" sy "valahany" na "vaniany" ary "tongony". Ny Lalana dia mety hiseho ao aminny iray aminireo sora-tsikidy enina ambinny folo toy ny Tareky 1 1, ny Jama na Asombola 2 2, ny Asorasady 2 1 1, ny Alahasady 1 2 ...
Ny fanalana faditra dia karazana sorona tanterahina mba hanesorana ny zava-dratsy na ny vokatr izany tsy hihatra amin ny tena, amin’ ny alalan’ ny fitondrana zava-manana aina na tsy manana aina; na amin’ ny alalan’ ny tsy fanaovana na tsy fitondrana na tsy fametrahana ao an-trano na ao an-tanàna zavatra voatondro manokana, arakaraka ny fototry ny zava-dratsy mahazo ny tena.
Ny Tale, araka ny fanaovana sikidy malagasy dia ny tsanganan - tsikidy voalohany, iray amin ny tsanganan - tsikidy enina ambin ny folo, izay apetraka any
Ny Lalana, araka ny fanaovana sikidy malagasy dia ny tsanganan - tsikidy fahadimy ambin ny folo, isan ireo tsanganan - tsikidy valo atao hoe tera - tsikidy
Tsy ny fotoana ihany no sahanin ny fanandroana malagasy fa ny erana sy ny zavaboary hafa koa. Ny sikidy dia fahaizana mikirakira voan - javatra tsaramaso
Ny Alisay, araka ny fanaovana sikidy malagasy dia ny tsanganan - tsikidy fahafito, izay mipetraka ao amin ny faàfana farany ambony, isan ireo atao hoe
ny filaharana sy ny isan ny voan - tsikidy mamorona azy, ao amin ny sikidy malagasy Samy manana ny anarany ny sora - tsikidy tsirairay araka ny isa sy ny
fandevenana ny Alarobia. Fanandroana Tetiandro malagasy Fivavahana eto Madagasikara Sikidy malagasy Finoan - drazana malagasy Astrologie et divination malgaches Astrologie
Ny Abily, araka ny fanaovana sikidy malagasy dia ny tsanganan - tsikidy fahenina, iray amin ny tsanganan - tsikidy fahenina, izay apetraka any amin ny farany
mpandinika ny tantaran ny sikidy malagasy dia mihevitra fa ny Antemoro no nahay nisikidy voalohany indrindra amin ny Malagasy Matetika aorian ny fisilidiana
Ny tera - tsikidy, ao amin ny sikidy malagasy dia ireo tsanganan - tsikidy azo avy amin ny fanakambanana na fampivadiana an - tsaina tsiroaroa ny tsanganan - tsikidy
sy ny sikidy Miantso an Andriamanitra na Zanahary koa ny Malagasy mandala ny fivavahan - drazana rehefa misy zavatra ataony. Ny 41 n ny Malagasy dia Kristiana